ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ကြုံရ ဆုံရ
ပိတ်ကားပေါ်မှာ ဘာဆက်ပြမလဲ မျှော်...
ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် ဒေါသ ထွက်ရတယ်ကိုမျိုးရေ... ဟုတ်ပါတယ် သူများနိုင်ငံမှာ ချွေတာစုစောင်းလာတဲ့ ငွေတွေ သူတို့က အသင့်စောင့်ပြိး လူလည်လုပ် ဗိုလ်ကျတာတော့ ..လွန်ပါတယ်...:(
အဲဒီလို ခြောက်စား၊ ဟောက်စား ဇတ်လမ်းတွေ အခုထိ ကြားနေရတာ စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်၊ နယ်တွေ ဖက်မှာဆို တော်တော်ဆိုးတယ်လို့ သိရတယ်၊ စာရိတ္တက တော်တော်လေးကို ပျက်နေတာဆိုတော့ အလွယ်နဲ့တော့ ပျောက်မယ် မထင်ဘူး၊ ဖတ်ရတာ မောပါ့ ညီရာ...။
၂) ဒေါသတွေ အလိပ်လိုက်ထွက်ရအောင်
ပြောပါတယ်.. မျက်နှာသနပ်ခါးနဲ့ ပေါင်မှာကျဉ်ငယ်စီးကြောင်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီပါလို့။ :)
Your experience is one of the reasons oversea Burmese take other citizenship. People in Burma never understand the kind of pain.
ကိုယ်ဖါသာတောင်ထောင်သားတွေများလား လို့ထင်မိတယ်။ရဲ၊နစက၊ ကလူတွေအကုန်ပဲ။အဲတော့ဗမာကဘယ်လုပ်ချင်တော့မလဲ၊
I was born in Myawaddy and I hate that region because of those people...
း(( ပြောပြန်ရင်လည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို နှိမ့်ချချင်တဲ့၊ နိုင်ငံခြားကိုမှ အထင်ကြီးချင်တဲ့သူလို့ အပြောခံရ ပြန်သေးတယ် ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံသား (စိစစ်ရေးကတ်ပြား ပြနိုင်သူ ) မှန်သမျှကို ဂိတ်တွေက စစ်ချင်ရင် ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်း ပါမပါလောက်ပဲ စစ်ဆေးခွင့်ရှိပြီး အခြား နည်း ( လဝက ဥပဒေ စသည်တို့အရ ) ရစ်လို့ မရအောင် အစိုးရက အမိန့်ထုတ်ထားရင် ဒီလို ကိစ္စတွေကို လျှော့နိုင်မှာပါ။ ဒီဖက်နိုင်ငံတွေ မှာတော့ ဒါမျိုးကြုံရရင် ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြည်နယ် လွှတ်တော်အမတ်/ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အမတ်တွေ ဆီကို email ရေးပြီး တွေ့ဆုံဖို့ Appointment လုပ်ကြတယ်ဗျ။ ကျနော်တို့ဆီ မှာလည်း ပြည်သူတွေက ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ( အမတ် ) တွေကို အဲဒီအကျင့်တွေ သင်ပေးရင် ကောင်းမယ်..။
နောင့် ရွာ ပြန်တိုင်း မကြာခဏ ကြားနေရတဲ့ အဖြစ်လေးတွေပါ။ ဒီလမ်း ဒီခရီးကို ရွာကလူတွေ ပြောလွန်းလို့ သိနေပေမယ့် မမြင်ဖူးဘူး။ ခုတော့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ။
ရွာကလူတွေက လိုက်လည်ပါလား ပြောပေမယ့် သူတို့ ပြောပြောနေတဲ့ ဒေါန တောင်တန်း ဆိုတာကြီး မဖြတ်ရဲလို့ ရောက်ဖူးမယ်လဲ မထင်ဘူး။း)
နောင့် ဒီပိုစ့် လေးကို ဖေ့ဘွတ်မှာ ရှယ်ချင်ပါတယ် ကိုမောင်မျိုး။း)
မောင်မျိူးရဲ့ Adventure ခရီးစဉ်က ၆ ခါဘီးပေါက်သောကားကို အင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားသွားပါသည်း)
တခါက ရန်ကုန်က ပြန်လာတာ ရေကြီးလို့ ရထားမရှိတဲ့အခါ ကျောပိုးအိတ်လွယ်ပြီး ရွာကို လမ်းလျှောက်ပြန်တာ တဘက်နိုင်ငံက ပြန်လာတာလား ဆိုပြီး အစစ်ခံရတယ်... တော်သေးတာပေါ့ ကျောပိုးအိတ်မှာ စာအုပ်တွေချည်းပဲမို့... ကိုယ်နယ်ဆိုတော့ ဒါတွေ အမြဲတမ်းပဲ ကြားရပါတယ်။ ရှယ်လိုက်မယ် လူများများသိပြီး နားပေါက်အောင်လို့...
စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ။ ကိုယ့်ချွေးနည်းစာကိုပေးရတာ ရင်နာသဗျာ။ မိဘအတွက် မသုံးရပဲ အဲဒီကောင်တွေပေးရတာ မသထာဘူး။ ပြောရင်းဒေါသတောင်ထွက်တယ်ဗျာ။
အဲဒါတွေ အဲ့လမ်းမှ မြင်ဖူးတယ်... ဘာကောင်တွေမှန်းကို မသိဘူး...
I can't imagine how do they want to spend others' money of blood and sweat.What kind of drive made their hearts do so,i wonder.Himmmmmm .... i just came back from Ko Yin and Doe kalayEeven Christmas time???????????????
အမ မရွှေစင် ပြောသလိုပါပဲ ..
ဓါတ်ပုံတွေ မြင်ရတာ လွမ်းတော့ အလွမ်းသား ...
ဇွဲကပင်ပွဲသွားရင်း ဘားအံဘက်ကိုရောက်ဖူးတယ် ။ တောင်တွေလည်း တော်တော်များတယ်နော် .
မျက်နှာပြောင်ကြီး နဲ့ ပိုက်ဆံတောင်းတာလောက်တော့ သူတို့ အတွက် ထမင်းစားရေသောက်လေ.. စိတ်ပျက်ချက် ..
အဲ့ဒါမျိုးတွေက နေရာတော်တော်များများမှာ ရှိနေတုန်းပဲ...။ အရိုးစွဲနေတာတွေ မဖျောက်သရွေ့တော့ ကြုံနေရဦးမှာပဲ...။
အစ်ကိုတို့ လဲ ဘာထူးလဲ ညီရေ... မြန်မာပြည် လေယာဉ်ကွင်း ခြေချမိတာနဲ့ တန်းအတောင်းခံရတော့တာဘဲ။ ဟား... မင်းက သုံးနှစ်လောက်လုပ်လာတာဆိုတော့ တော်တော်လေး စုမိလာမှာပေါ့... တို့ အတွက်လဲ လုပ်ဦးလေတဲ့... ဘယ်လောက်ပါးပိတ်ရိုက်ပစ်လိုက်ဖို့ ကောင်းလဲ။ မသိကိုယ်ကဘဲ သူ့ ကို လုပ်ကျွေးဖို့ နိုင်ငံခြားသွား အလုပ်လုပ်တာကျနေတာဘဲ...
လေယဉ်ကဆင်းတာနဲ့တန်းတောင်းတော့ပဲ..အလုပ်လုပ်နေတာလား..ဘယ်မှာလဲ အခွန်ဆောင်ထားတာ..ဘယ်မှာလဲ ခွင့်..ပိုက်ဆံပေးရင်တောင် ဟောက်သေးတာ..တောင်းတာတောင် ကောင်းကောင်းမတောင်းဘူး...ကျက်သရေမရှိ အတော်မိုက်ရိုင်းတဲ့ သူတောင်းစားတွေ..စလုံးကို ပြန်ရင် ဘာမှ ပေးစရာ၊ ဘာမှ ပြစရာမလို..ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပြန်ရင် အတော်စိတ်ရူပ်ရတယ်
ဟုတ်တယ်ကိုမျိုးရေ ၊ အဲ့ကောင်တွေကလဲ ခုထိကိစ္စမတုံးကြသေးဘူးဗျာ ၊ စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ် ၊ ကိုယ့်ဘာသာနေတာတောင် တရားခံကြီးလိုဆက်ဆံခံနေရတာ တစ်ကယ်တစ်ကယ် ၊